Waa kuma Magafe? | Sahan radio
Waa kuma Magafe?
Waa Ayo Magafe?
Magafe waa magac ay soomaalidu u taqaan xarunta u weyn ee kooxda mukhalasiinta ah. Waa halka lagu bixiyo lacagta ugu badan kuuna gudbinaysa safarka intiisa kle iyo halkii aad doon ka raaci lahayd.
Magafayaashu way kala duwanyihiin deegaan ahaan hase yeeshee waxay ka simanyihiin, dhibaatada, hoogga iyo rafaadka lagala kulmo oo waaba sababta loo siiyay magaca magafe, waa kuwa aan xumaanta iyo sharka gafin, waa kuwa aan dilka iyo dhaca umada aan gafin, waa kuwa silic iyo hoog inay dadka u horseedan aan gafin.
Magafe waa koox isku xiran oo mukhalasiin ah, waxay ka kooban yihiin, Soomaali, Suudaaniis, Liibiyaan, Jaad iyo weliba qawmiyado kale. Waa silsilad is haysata ilaa maalinta aad meesha u horeysa aad safarka kasoo bilowdid ilaa meesha aad doonta ka fuulaysid.
Magafaha u weyn ama qoloda magacaas magafe sida gaarka ah loo siiyo meesha uu daganyahay ama xarunta lagula kulmo waa wadanka Liibiya. Deggaan ahaan xeryaha magafe waxay ku yaalan saxaaraha iyo magaaloyinka waaweyn ee libya. Magafaha aad u tagi doontid waxa ay ku xirantahay mukhalaska kaa soo dira halka aad safarka ka soo bilowdid, tusaale ahaan sida Adis Ababa ama Khartuum.
Waxaad halkaas ka garan kartaa ninka mukhalaska soomaaliga ah ee magaalooyinkaas kaasoo dira in uu ka mid yahy kooxda guud ee laysku yiraahdo magafe. Wuxuu hayaa shaqada tahriibka oo dhan qaybteeda ugu muhiimsan oo ah isku xirka Liibiyaanka iyo Waalidka lacagaha soo dira. Waxay fududeeyaan sidii lagu heli lahaa lacagtaada, waaba ninka ay qoyskaagu la soo xiriirayaan si ay lacagtaada ugu soo hagaajiyaan. Deedna uu u sii dirayo qolyaha libyaanka ah. Qaybtood ayba xawaalado dhan u furteen oo lacagahaas laysku soo dirayo uu hungurigooduba ku jiro. Dabcan liibiyaankaan ku haystana wuxu ka goosanayaa lacag xoogleh. Sababtoo ah wuxuuba ahaa qofkii kula soo heshiiyay markii hore inta aadan soo gaarin xerada magafe, halkaasna aad ka dhadhansan kartid doorka uu ku leeyahay qofka soomaaliga ah la kulankaaga magafe.
Sidoo kale waxaa ka mid ah kooxda guud ee magafe laysku yiraahdo, niman mad madoow oo xoog waaweyn, oo U dhashay Suudaanta madoow iyo qowmiyadaha kale ee Afrikada aadka u madoow. Kooxdaan Wajigoodu cabsida iyo argagaxu ka muuqdo badanaa waxay masuul ka yihiin xeryaha dadka lagu hayo. Oo waxay masuul uga yihiin Carab liibiyaan ah oo aan isagu in meelaha lagu arko rabin balse sheekadoo dhan kor kala socda. Kuwaas xeryaha madaxda u ah waxaa ka sii hoos shaqeeya kuwo kale oo u badan Xabashi iyo Soomaali. Kuwaani iyagu waa gacan yarayaal, waxay qabtaan shaqooyin ay kamid yihiin, in ay dadka taleefano u diraan si qof walba uu reerkiisii ula xiriiro deedna uu lacagtii lagu furan lahaa uu u dalbado. In ay makanoonida ceeriin ee xeryaha qaybtood laga cuno ay kariyaan laba jeer maalintii. In ay si arxan daro ah ay dadka u garaacaan, tuubo iyo alwaax waxay heleyaanba ay sidii waxaan cidna dhalin ay u tumaan qofkii lacagtiisu daahdo, kii dhaqan xumo kale sameeya ama hadal kusoo celiya.
Ugu dambyntii waxaa jirta qaybta guud ee ugu saraysa kooxdan magafe la yiraahdo, waa niman Liibiyaan ah oo badanaa loogu yeero magacyo ay ka mid yihiin Abuu Shayba iyo Abuu Shanab iyo Abuu Fulaan iyo wax lamid ah. Waa niman burcad iyo iskugu jira saraakiil hore oo ka shaqayn jiray dawladii marxuum Qadaafi. Waxay ka ganacsadaan Hubka, Daroogada, Shidaalka iyo weliba bini’aadamka oo waa ayagaa malaayiin qof u haysta madax furashada.
Magafaha aad xeradiisa imaanaysid waxay ku xirantahay mukhalaska ku soo dira, oo waa silsilad is haysata waxoo dhami. Ha yeeshee sidaas oo ay tahay magafayaasha la yimaado ayagii baa sii kala duwan. Magafaha qayb ka mid ah waxay ku yaalaan saxarahaa cidlada ah ee ku beegan halka u dhaxaysa Liibiya iyo Jaad. Waa dhul buuro leey ah, kuna beegan marka laga soo dhamaado saxaarihii bacaadka ahaa. Waa dhul dhadhaab ah oo u badan buuro shiilimaad ah oo mad madoow, una eeg kuwa shidaalka laga qodo. Magafaha caynkaan ah dadka yimaada waa kuwa ugu nasiibka xun dhamaan dadka halkaa mara sababtoo ah halkani waa meesha ay taalo aafada ugu weyn ee tahriibka.
Hadaba ilaa shalay Magafe unbaynu hadal haynaa ee Soomaaliyeey ogaada In magafaha la sheegayo Uusan nin dadka dariiq u fadhiya ahayn ee ay tahay shirkad sidaas iskugu xiran qaybta ugu xooganna ay isla Soomaali un yihiin.
Waa Qalinkii Abdiwali Moalim